ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: သူရဲကောင်းတို့ ဘယ်မှာဆုံကြမလဲ
တစ်ညတွင် စာရေးသူ ည ၈နာရီ ၃၀ လောက်တွင် မြေနီကုန်း မှ တက်စီ ငှား၍ ပြန်လာခဲ့..သည်။
ကားစီးသည့်အခါ..စကားစမြည်ပြောရင်း…အသက် ၄၆နှစ် အရွယ်ရှိ ထိုကားသမား ကြီးမှာ..ဘွဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်း..
ကလေး ငယ် ၆နှစ် ၃ နှစ် နှစ်ယောက်ရှိကြောင်း..။ owner ခအတွက် တစ်နေကုန်ရှာပြီး ယခု မှ မိမိအတွက် စ၍ ကျန်ကြောင်း…ညဉ်းငြူ ၍ ခံစားရသမျှ စိတ်ထဲ ရှိသမျှ အားရအောင် ပြောတော့သည်။
မီးကြီးလောင်နေသော အိမ်တစ်လုံးတွင် လူပေါင်းများစွာ ပိတ်မိနေသည် ဆိုကြပါစို့။ တံခါးပေါက်များစွာတွင်လည်း သော့များ လုံခြုံစွာခတ်ထားသေးသည် ဆိုလျှင်
သင်သည် လူ့အသက်ကယ်နိုင်ဖို့ရာ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း…
သေချာသည်မှာ အိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင် ၀ိုင်းကြည့်နေသော လူပရိတ်သတ်များကဲ့သို့
“မီးဗျို့ မီးဗျို့” “မီးလောင်နေတယ်ဗျို့”
ဟုကျယ်လောင်စွာ အော်နေရုံနှင့် မီးမသေနိုင်ပေ။
ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ် ကြေကွဲ နေရုံနှင့်လည်း မပြီးပေ။
အရေးပေါ်လူကယ်နိုင်ရန် သော့တံခါးများကို ဖျက်ချပစ်ရမည် မီးလောင်အိမ်၏
အနီးဆုံးတွင် ပတ်ပြေးရုံနှင့် ခတ်ထားသည့်တံခါးသော့များ ကျိုးမည်မဟုတ် သင်သည်ပင်လျှင် မီးထဲသို့ပါသွားနိုင်သေးသည်။
သင့်အားမည်သို့ပင် ခေါင်းစဉ်တပ်၍ အရပ်ကခေါ်စေ..သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မပြီးမြောက်ပဲ
လူကယ် တင်မည့် အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးရခြင်း ထက် မပိုပေ။
ထို လူတို့အသက်ကို ဘ၀ကို ကယ်ချင်သည်ရှိသော်
ထို ပုဂ္ဂိုလ်သည် မုချ မီးထဲ ဆင်းရပေမည်။
ကရောသောပါး အစီအစဉ်မရှိပဲ ဆင်းလျှင်လည်း မဖြစ်သေးပေ..လူကယ်ရင်း မကယ်နိုင်ပဲ တစ်ဦးစီသော်လည်းကောင်း မီးထဲ ပါသွားသည်က သာ များပေသည်။
ထို့ကြောင့် စနစ်တကျ နှင့် အမြန်ဆုံးအစီအစဉ်ချ၍ မီးလောင်အိမ် နဘေးတွင်ကပ်ပြေး အော်မနေပဲ
အမြန်ဆုံးထိထိရောက်ရောက် မီးငြိမ်းရန်သော်လည်းကောင်း၊ အချိန်မှီကယ်တင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊
မီးထဲ ဆင်းဖို့ ရန် အတွေ့အကြုံရှိသော မီးသတ်သမားများ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာ ခံ ၀ံ့ သော မီးသတ်သမားများ..အလျင်အမြန် တမဟုတ်ချင်း ရွေးထုတ်ရပေမည်။ ထို့ပြင် မီးထဲ ၀င်၍ကယ်နိုင်ဖို့ရာ
အပြင်မှ မီးသတ်သမားများနှင့် ရေအားလည်း အလုံလောက်ရှိရပေဦးမည်။
လူကယ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်လည်း လိုအပ်သော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာပါရဦးမည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည် မီးလောင်အိမ်ရှိ လူတို့အား ကယ်ချင်လျှင် အော်နေသောအလုပ်ကို ရပ်၍မီးကို သတ်ရမည်။ မီးလောင် အိမ်၏အနီးအပါးတွင်ပတ်ပြေးခြင်းကိုရပ်၍ အချိန်မှီ
ခတ်ထားသော တံခါးသော့များ ဖျက်ချနိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်။ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေလျှင် အမြန်ဆုံး ဖြည့်တင်းဖို့ရန်မှာ လူကယ်ချင်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးဆုံး တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများ ညီညွတ်နေလျှင် မည်မျှပင်မီးတောက် ကြီးနေပါစေ ကျန်ရှိ၍ မသေသေးသော လူပေါင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်စွာ ကယ်တင် နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် စက္ကန့်တိုင်းကို မီးသတ်ဖို့ရန် တံခါးသော့များ ဖျက်ချ နိုင်ဖို့ ရန်ဦးတည်ချက်ထား၍
“လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များစွာ က ပေးခဲ့သော သင်ခန်းစာသည်လည်းကောင်း ယခုတိုင်ပေးနေဆဲ သင် ခန်းစာတို့သည် လည်းကောင်း မီးသည် သတ်မှ သေ၍ တံခါးသည် ရိုက်ချိုးမှ ကျိုးမည်”ဖြစ်သည်။
အုပ်စုလိုက်(သို့) တစ်ဦးချင်း သတ္တိရှိစွာ မီးထဲ ၀င်ရသည် ရှိသော် လောင်စာသာ ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
ယခုလောင်နေသော အိမ်မှာ “မိမိတို့ အိမ်ဖြစ်သည်။”
မီးထဲရှိလူများမှာ “မိမိတို့ မိသားစုများဖြစ်သည်။”
တစ်ချို့မှာ ချောင်ထဲတွင်ပိတ်မိ၍ မထွက်နိုင်ကြတော့ပေ။
တစ်ချို့မှာ တစ်မြိုက်မြိုက်နှင့် မသေမချင်း အလောင်ခံနေကြရသည်။
ဘက်မမျှပဲ ပြိုင်ပွဲဝင်ရခြင်းမှာ ကြောင်ကြီးနား ကြွက်ပတ်ပြေးရသလို ဖတ်ဖတ် မောရုံ အပြင် မရှိပေ။
မီးထဲရှိလူများကို မကယ်နိုင်ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ မိမိတို့၏အားနည်းချက်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။
ကံဟု ဆို လျှင်လည်း တစိတ်တပိုင်းမှန်ပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ…လိုအပ်သော အခြေအနေများ မပြည့်စုံ ၍လည်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်သာ မီးတောက်ကြီးကို နှစ်ရှည်လ များစွာ မ သတ်နိုင်ပဲ ရှိခဲ့သည်။
မိမိတို့ ခေတ်မသတ်နိုင်ခဲ့ သော် နောင်တစ်ခေတ်မိမိတို့ ၏သားစဉ်မြေးဆက်…
သူများအိမ်တွင် ပြောင်းနေရသော် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် သူများ အိမ်ဆိုသည်မှာ မည်မျှပင်ခမ်းနားစေ ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်၍ ကိုယ့်အိမ်လောက်တော့ ကောင်းမည် မဟုတ်ပေ။ အချိန်တန် ၍ ကျွနုပ်တို့ အိမ်ပြန်ချင်ပြီဆို သောအခါ…ပြာဖြစ်လုနီးပါး..ဖြစ်နေသောကိုယ့်အိမ်ကို ကြည့်၍ အိမ်လွမ်းသူတိုင်း အိမ်လွမ်းသည့်အခါတိုင်း ကြေကွဲ ကြရသည်။ အိမ်ရှိ သားချင်းများ မီးလောင်နေသည် ကြည့်၍လည်း မခံ မရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်ကြရသည်။ နောင်လာမည့် မိမ်ိတို့ မျိုးဆက်များ မိမိတို့ကဲ့ သို့ ဆိုးရွားစွာမခံ ကြစေရန် မိမိတို့ ကြိုးစားကြရမည်။
အချို့မှာ အမှန်ပင် မသေမရှင် ဖြစ်နေကြရပါပြီ။
မပြည့်စုံ လျှင် အမြန်ဆုံး အချိတ်အဆက် မိမိ၊ စည်းစည်းလုံးလုံး နှင့် ကျွန်ုပ်တို့
လူစုံပြီဆို ကူညီမည့်သူများအသင့် ရှိနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
နှစ်ရှည်လများ ပျောက်ဆုံး နေသော ယုံကြည်မှုကို ဘယ်ကစ၍ မွေးမြူကြရမလဲ…
နှစ်ရှည်လ များ အဖျက်ဆီး ခံ ခဲ့…ရသော… စိတ်ဓာတ်များ.. ဘယ်လိုကောင်း အောင် မွေးမြူကြရမလဲ..
ကျွမ်းကျင်သော မီးသတ် သမား များ ဘယ်မှာ ရှာ ရပါ့မလဲ….
ဘယ်လို ပြန်ပြီး စုစည်းကြရမလဲ…
ကဲ သူရဲကောင်းတို့ ဘယ်မှာ ဆုံကြမလဲ…….?????